Irhashalala kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba ibonisa izifo ezahlukeneyo. – Noor Health Life
Irhashalala kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba ibonisa izifo ezahlukeneyo.
Inkqubo yokufumana amaqhakuva emzimbeni wethu yendalo kodwa ukuba aqala ukufumana ngaphezulu kwindawo ethile ngoko abonisa isifo.
Ukuba iipimples zivela kule nxalenye, luphawu lomonakalo kwi-adrenal glands.
Uxinzelelo olugqithileyo emsebenzini kunye noxinzelelo kunokubangela irhashalala kweli lungu lomzimba.Ikwaluphawu lobuthathaka bomzimba wokuzikhusela ngoko ke ungakhathazeki kwaye uzolile.
I-Noor Health Zindagi izama ukufumana okulungileyo kuwe kunye noogqirha abakhulu ngeNoor Health Zindagi. Ugqirha wotyando Umcebisi. Iinjingalwazi. Ukusebenza kweNoor Health Life kunceda abantu abahluphekayo kwaye siyakucela ukuba uthathe inxaxheba kulo msebenzi kwaye uxhase iNoor Health Life. Funda ngokugqithisileyo.
Ukuba i-rash ibonakala esifubeni, oko kuthetha ukuba inkqubo yakho yokugaya ayisebenzi kakuhle kwaye kuya kufuneka utshintshe ukutya kwakho.
Unobangela werhashalala kukunqongophala kweevithamini, oku akuthethi ukuba kufuneka uqale ukuthatha izongezelelo zevithamini kodwa wenze ukusilela ngokutya.
Unobangela woku kukunyuka kwezinga leswekile emzimbeni.Ngoko ke, musa ukusebenzisa iswekile eninzi nesonka, koko yanela yimifuno neziqhamo.
Ngaphezu kwemilenze nangaphantsi kwetorso
Ukuba usebenzisa isepha engahambelaniyo nesikhumba sakho, ngoko ke irhashalala ibonakala kule ndawo, ngoko jonga isepha yakho.
Inxalenye ephezulu kunye nephakathi kwesinqe
Ukuba awulali ngokwaneleyo, kuya kuvela amaqhakuva kule ndawo, ngokufanayo utya ukutya okutyebileyo ngeekhalori.
Unobangela werhashalala yingxaki yokwetyisa ukutya.Ikwabonisa ukuba awutyi ukutya okunesondlo. Iimbangela kunye nokunyangwa kwamaqhakuva.
Amaxesha amaninzi asiyazi ukuba kutheni sinamaqhakuva ebusweni bethu.Akukho sizathu sithe ngqo sokuvela kwamazinyo kodwa zinokuba zininzi izizathu zoku.Ezinye zezizathu kunye nonyango lwazo zezi zilandelayo.Masithethe ngazo.kuxelele iinkcukacha ezithile.
Ukungabikho kokutya okunokulinganisela kunye nokutya okuphezulu kwe-carbohydrates ecocekileyo kunokubangela i-acne nakweyiphi na iminyaka.Ukutya okunokulinganisela kunye nokutya kunye ne-low glycemic index kubalulekile.Abaphandi bathi amazinga aphezulu e-insulin egazini angabangela ukuveliswa kweoli eninzi. kunye neefollicles ezivuthayo.Nawe unokwenza ukutya kwakho kube nempilo kunye nokulinganisela.
Itekhnoloji yale mihla ebizwa ngokuba yiblue light therapy iyasetyenziswa namhlanje ukususa amaqhakuva ebusweni.Le mitha yeblue inamandla igqobhoza ulusu ngeefollicles ibulale ibacteria.inokubangela ububomvu esikhumbeni kodwa ithutyana,ngoko ke ukuba ibhajethi yakho iyakuvumela. , olu nyango lungcono ukukhupha i-acne kunye nokufumana ulusu olucacileyo.
Ioyile yomthi weti edume kakhulu kwaye ethambileyo xa ithelekiswa nebenzoyl peroxide iluncedo ekunyangeni zonke iintlobo zamaqhakuva kuyo yonke iminyaka Ioyile yomthi weti ineempawu zendalo ezibulala amagciwane ezicoca iimbobo ezivaliweyo kunye nolusu. kwaye ngokwemvelo kunciphisa ukudumba kolusu Le oli ikwasetyenziswa kwizinto ezininzi zokuthambisa, ukuhlamba ubuso kunye neesepha.
Ngokwe dermatologists kunye neengcali zempilo, yehlisa umthamo wetyuwa ekutyeni kwakho.Noor Health Life ithi enye yezona zinto zibangela i-acne kukutya okuphezulu kwe-sodium.. Unonophelo olukhethekileyo xa usitya kwi-outs, kungangcono ukuba udle ngaphantsi kwe-sodium. I-1500 mg ye-sodium imihla ngemihla.
Uxinzelelo lunefuthe elibi kwindlela yokusebenza kwehomoni.. Uxinzelelo alunampembelelo ngqo eluswini kodwa ngalo lonke ixesha uxhalabile kuvela amaqhakuva esikhumbeni sakho.Ukwanda okuchaphazela namadlala akhupha i-oyile emzimbeni.Ukucamngca, umthambo okanye nayiphi na enye into. indlela ingasetyenziswa ukunciphisa uxinzelelo olunokuthi luthomalalise isimo sakho sengqondo.
Ukuze ufumane iziphumo ezingcono, kubalulekile ukudibana ne-dermatologist elungileyo kunye notshintsho olufanelekileyo kwindlela otya ngayo kunye nendlela yokuphila Izifo ezibonakala eluswini.
Iimpawu zokuqala zezinye izifo zivela eluswini.
Ulusu lelona lungu likhulu lomzimba womntu kodwa ubusazi ukuba likwaxela kwangaphambili izifo?
Ewe, iimpawu zokuqala zezinye izifo zivela eluswini.
Kodwa ngaba uyazazi iimpawu ezibonisa ulusu kwizifo ezahlukeneyo?
Ngokuqhelekileyo kukholelwa ukuba i-bursitis yindlela yokusabela ekuseleni ubisi emva kokutya intlanzi, kodwa inzululwazi yezonyango iyakukhanyela oku.Enyanisweni, kwenzeka xa ulusu luvezwe kwindalo yalo. eluswini luhlaselo kwiiseli zolusu yinkqubo yomzimba yokuzikhusela kwizifo, ekwimelanin, ibala elinemibala eluswini.
Amabala omileyo, arhawuzelelwa, nabomvu eluswini akholisa ukuvela kufutshane nentamo okanye iingqiniba Sisifo solusu esixhaphake kakhulu esinokuthi sichaphazele abantwana kunye nabantu abadala, kodwa sikwanokuba luphawu lweengxaki zempilo yengqondo. Ngokutsho kophononongo lwase-US, abantu abanoxinzelelo okanye uxinzelelo banokuthi babe nesi sifo kwangoko, kodwa ukunyanga i-dermatitis kukwaphucula impilo yengqondo.
Iswekile ephezulu ixesha elide inokuchaphazela ukuhamba kwegazi kwaye yonakalise imithambo-luvo, nto leyo echaphazela amandla omzimba okuphilisa amanxeba ingakumbi emilenzeni, nto leyo enokukhokelela kwisifo seswekile.
Kwesi sifo solusu, amaxolo avela eluswini kunye nokurhawuzelelwa nokurhawuzelelwa, kodwa akwalatha kwiingxaki ezinzulu zonyango. Ngokutsho kweengcali zonyango, abantu abanale meko banomngcipheko ophezulu we-58% wesifo senhliziyo kunye ne-43% yengozi ephezulu ye-stroke. Iingcali zithi i-psoriasis kunye ne-blood clots kwi-artery zibangelwa ukudumba kwaye le nto idibanisa zombini.
Ingqolowa epinki okanye iyunifomu
Esi sifo sibangela ukuba ulusu lujike lube bomvu kwaye lubonakale irhashalala epinki, abantu abaninzi abayinyangi kuba bengayiboni iyingozi, kodwa uphononongo olutsha lwafumanisa ukuba imeko yonyusa umngcipheko wokuphazamiseka kwengqondo kwabasetyhini ngama-28%. ubudala bungaphezu kwama-50 okanye ama-60 eminyaka.
Imilenze enesikhumba esomileyo nesiqhekekileyo
Oku kunokuba luphawu lweengxaki kwi-thyroid gland (ingakumbi amadlala akufuphi noqhoqhoqho), ngakumbi xa kungenamsebenzi wokunyamekela ukufuma ezinyaweni. Xa kukho ingxaki kwidlala lengqula, alikwazi ukuvelisa iihomoni zegilo ezisebenza kwisantya semetabolism, uxinzelelo lwegazi, ukukhula kwezihlunu kunye nenkqubo yemithambo-luvo. Ngokophononongo lwezonyango, ngenxa yeengxaki zeThai Ride, ulusu luba lome kakhulu, ngakumbi ulusu lweenyawo luqala ukuqhekeka kwaye kunenzuzo kuphela ukubona ugqirha ukuba imeko ayiphucukanga.
Ukubila ngokugqithiseleyo ezandleni kunokukhokelela kwisifo se-thyroid kunye nokubila ngokugqithiseleyo, apho amadlala okubila asebenza ngakumbi. Uninzi lwabantu lufumana le ngxaki kwindawo enye okanye ezimbini zomzimba ezifana nekhwapha, iintende okanye iinyawo. Oogqirha banokuyihlola baze banike unyango.
Amaqhuma amnyama okanye i-moles
Ngokubanzi, ii-moles ezimnyama ezibalaseleyo okanye amaqhuma anokuba luphawu lomhlaza wolusu, ngelixa zinyusa umngcipheko womhlaza wamabele, isinyi kunye nomhlaza wezintso. Ngokutsho kweengcali, ukuhamba kancinci elangeni, ukuhlala ukhuthele, ukutya okunempilo kunye nokuhlala kude notywala kubalulekile ukuphepha umhlaza obulalayo onjalo.Ukufumana imibuzo engakumbi kunye neempendulo, qhagamshelana noNoor Health Life nge-imeyile kunye ne-can. noormedlife@gmail.com